မြန်မာအင်ဂျင်နီယာတွေ ပထမဆုံး လွှတ်တင်မယ့်ဂြိုဟ်တု
ဂြိုဟ်တုတည်ဆောက်ရေး လုပ်ဆောင်နေတဲ့ မိတ္ထီလာရှိ မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာတက္ကသိုလ်က ပညာရှင်များ။ (ဇွန် ၁၉၊ ၂၀၂၀)
မြန်မာနိုင်ငံ လေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာတက္ကသိုလ် MAEU က အင်ဂျင်နီယာတွေဟာ မြေကမ္ဘာလေ့လာရေးဂြိုဟ်တု Earth Observation Satellite လွှတ်တင်ဖို့ လုပ်နေပါပြီ။ ဒီစီမံကိန်း နဲ့ပတ်သက်ပြီး အပြည့်အစုံသိရဖို့ ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်သွင် ကို မေးမြန်းပြီး တင်ပြပေးမှာပါ။
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေးပေါ့နော် Earth Observation Satellite က micro satellite ဂြိုဟ်တု အမျိုးအစား အသေးစား ပေါ့နော်။ ကီလိုဂရမ် ၅၀ ရှိတဲ့ မိုက်ခရို Satellite ကို ကျနော်တို့ နိုင်ငံတကာ အာကာသ စခန်းကနေ လွှတ်တင်ဖို့ ရှိပါတယ်။”
ဒီကမ္ဘာမြေလေ့လာရေး ဂြိုဟ်တုဟာ မြန်မာနိုင်ငံက ကိုယ်ပိုင်ဂြိုဟ်တု လွှတ်တင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ တတိယ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။ ၂၀၁၆ မေလ ထဲမှာ Intelsat ကုမ္ပဏီ ရဲ့ ဆက်သွယ်ရေး channel ကို ငှါးသုံးတဲ့ MyanmarSat-1 နဲ့ ပထမအဆင့်ကို စတင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၉ နိုဝင်ဘာလမှာ Intelsat ကုမ္ပဏီနဲ့ပဲ နောက် channel တခုကို ၁၅ နှစ်တာ ငှါးသုံးတဲ့ MyanmarSat-2 ကတော့ ဒုတိယ အဆင့် ဖြစ်ပါတယ်။
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“ဆက်သွယ်ရေးကဏ္ဍ အနေနဲ့ ကျနော်တို့ Intelsat နဲ့ MyanmarSat-1 ဆိုပြီး လွှတ်ခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကတော့ condoSat အမျိုးအစားပေါ့နော်။ ဟိုမှာရှိတဲ့ transponder ကို ဝယ်ပြီး မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ၊ နောက် အင်တာနက် အသုံးပြုမှုတွေ၊ ရုပ်သံထုတ်လွှတ်မှုတွေ အတွက်ပါ။ နောက်တခါ ကျနော်တို့က joint satellite ပေါ့နော် Intelsat နဲ့ ကျနော်တို့ မြန်မာဘက်နဲ့ တဝက်စီ ကျခံ ပြီးတော့ ပါတဲ့ transponder လည်း တဝက်စီပေါ့။ အဲဒီလို လွှတ်ခဲ့တာတွေ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေက ဆက်သွယ်ရေး ကဏ္ဍ အတွက် အများကြီး အထောက်အကူပြုတယ်။ နောက် အင်တာနက် အသုံးပြုမှုတွေ၊ broadcasting အသံလွှင့်တာတွေ အတွက် အထောက်အကူ ပြုတယ်။
သို့သော်လည်း ကျနော်တို့ ဒီမှာ လိုတာတွေက ကဏ္ဍတွေ sector တွေ အများကြီးပဲ။ စိုက်ပျိုးရေး၊ မွေးမြူရေး၊ သစ်တော၊ ရေလုပ်ငန်း၊ နောက် သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် စသဖြင့် ဒီဟာတွေ အတွက်လည်း ဂြိုဟ်တု လွှတ်ဖို့ရာ လိုတယ်။. အဲဒီအတွက်က အခု ပြောတဲ့ ကမ္ဘာမြေလေ့လာရေး ဂြိုဟ်တု လိုပါတယ်။ အဲဒီ ဂြိုဟ်တုကနေ ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တုဓါတ်ပုံတွေ satellite image တွေ ပေးတယ်။ ဒီ ဓါတ်ပုံတွေ ပေါ်မှာ ကျနော်တို့က နည်းပညာနဲ့ သုံးနိုင်တာ အတော်များများကို ဒီ ကမ္ဘာမြေဂြိုဟ်တုကနေ ပံ့ပိုးပေးနိုင်တယ်ပေါ့။”
မေး။. ။ “ဘယ်လို ပံ့ပိုးပေးနိုင်တာပါလဲ။ ဒီဂြိုဟ်တုကို အသုံးချနိုင်တာတွေက ဘာတွေပါလဲ”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ဆို ဆိုပါတော့ ကျနော်တို့မှာ ရေကြီးတယ်။ ရေကြီးတယ်ဆို ရေဧရိယာ - flood monitoring (ရေလျှံမှု စောင့်ကြည့်ရေး) လုပ်လို့ရတယ်။ အဲဒီ ရေလျှံတာ ကနေ ပျက်စီးမှု ဘယ်လောက်ဖြစ်နိုင်သလဲ၊ နောက် ရေလွတ်ရာတွေ ဘယ်လို စီမံခန့်ခွဲ ကြမလဲ ပေါ့နော်။ Disaster management သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ် ဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု။
နောက်တခါ အခု လွှတ်တင်မယ့်ဟာက weather ရာသီဥတု အတွက်လည်း ကြိုတင်ခန့်မှန်းလို့ forecasting လုပ်လို့ရမယ်။ ဆိုပါစို့ စောစောက thunder storm လေပြင်းမုန်တိုင်း တခုက ဘယ်ကို ဦးတည် သွားနေတယ်။ ဘယ်လောက်နှုန်းနဲ့ တိုက်နေတယ် ဆိုတဲ့ မိုးလေဝဿ ခန့်မှန်း တွက်ချက်မှု ကိုလည်း ပိုပြီး accuracy ကောင်းအောင် ပိုပြီး တိတိကျကျ ဖြစ်အောင် လုပ်ပေးနိုင်တယ်ပေါ့နော်။
နောက် စိုက်ပျိုးရေးဆို ဒီ ကောက်ပဲ သီးနှံတွေရဲ့ အခြေနေကို စောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့ crop monitoring ပေါ့။ ကောက်ပဲသီးနှံတွေက ပိုးကျနေသလား။ ဒါမှ မဟုတ်လည်း သူတို့ရဲ့ အပင်ဖြစ်ထွန်းမှု အတွက် မြေသြဇာ လိုနေသလား။ ဒါက ကျနော်တို့ ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံ ရလာတာ ကနေ ကျနော်တို့ color index အရောင်တွေနဲ့ သတ်သတ်မှတ်မှတ် ပြန်ခွဲပြီးတော့၊ သဘောက- ဆိုပါစို့ ကျနော်တို့က ပိုးမွှားတွေ ကျတယ်၊ ကျိုင်းကောင်တွေ ကျတယ်၊ ဒါဆိုလို့ ရှိရင်လည်း ကျနော်တို့က satellite image ကောင်းကင်ဂြိုဟ်တု ဓါတ်ပုံ ရိုက်လိုက်တယ်။ ရိုက်လိုက်ပြီးတော့ အဲဒီအပေါ်ကနေ ဘယ်နေရာ တွေကတော့ ပိုးကျနေတယ် ဆိုတာ ကျနော်တို့က အကုန် အတိအကျ ပြန်ပြီးတော့ တွက်ထုတ်ယူလို့ ရတယ်ပေါ့နော်။
ကျနော်တို့ အခု satellite image က GIS နည်းပညာနဲ့ အခုဆို survey မြေတိုင်းတာတွေ၊ ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနတို့ ဘာတို့ကနေ သုံးတဲ့ land use မြေအသုံးချမှုတွေ၊ နောက် သစ်တောတွေရဲ့ အနေအထားတွေ ပေါ့နော်။ deforestation သစ်တောပြုန်းတီးမှုတွေ ဘယ်လို ဖြစ်နေသလဲ ၊ သစ်တောတွေပြုန်းတီးမှုဘယ်လိုရှိတယ်၊ ဘယ်နေရာတွေမှာ ဘယ်လို cover ဖြစ်အောင် ပြန်လုပ်လို့ ရမလဲ ဆိုတာတွေ၊ မြေအသုံးချမှုနဲ့ ပတ်သက်တာတွေ၊ နောက် urban planning တွေ ပေါ့နော်။ ဒီဟာတွေ ကိုလည်း ရလာတဲ့ satellite image ကနေမှ GIS နည်းပညာနဲ့ ပေါင်းပြီး အသုံးချမယ် ဆိုရင် ရပါတယ်။ နောက်ဆုံး national planning ပေါ့နော်။ ဒီ national planning လုပ်တဲ့ အချိန် ထိအောင်ကိုပဲ ကျနော်တို့ satellite image က အများကြီး အထောက်အကူ ပေးနိုင်ပါတယ်။”
မေး။. ။“အခု ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေးဂြိုဟ်တု EOS စီမံကိန်းမှာ လွှတ်တင်မယ့် ဂြိုဟ်တုတွေ နဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို စီစဉ်ထားပါသလဲ။”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“အခု စီမံကိန်းမှာတော့ ဂြိုဟ်တု ၂ လုံးလွှတ်တင်မှာပါ။ အခု ပထမတလုံးက လာမယ့် ၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီမှာ တင်မှာပါ။ တင်တာက ကမ္ဘာမြေ အထက် ကီလိုမီတာ ၄၀၀ နဲ့ ၆၀၀ ကြားထဲမှာ ရှိမှာပေါ့နော်။ နောက် ဒုတိယ အလုံးကတော့ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ဖြစ်ပါတယ်။ ဂြိုဟ်တုမှလည်း သူ့သက်တမ်းနဲ့သူ ရှိပါတယ် ခင်ဗျ။ ဒါဆို ၂ နှစ်ခွဲ သုံးနှစ် အဲဒီ ပတ်ဝန်းကျင် အဲလောက်မှာ သုံးလို့ရပါတယ်။
ဥပမာ ဆက်သွယ်ရေးဂြိုဟ်တု ဆိုရင် သူ့ရဲ့ သက်တမ်းက ၁၅ နှစ်။ တခါထည်း သတ်မှတ်ပြီးသား။ သတ်မှတ်ပြီးသား ဆိုတာက သူ့ထက် ပိုသွားလည်း နဲနဲပဲ။ အများကြီး မပိုဘူးပေါ့နော်။ ဘာလို့လည်း ဆိုတော့ သူ့မှာ ဂြိုဟ်တုကို ထိန်းကျောင်းဖို့ လိုတဲ့ feul လောင်စာတွေ ရှိတယ်။ အဲဒါက ဂြိုဟ်တုနဲ့အတူ တခါထဲ တွက်ချက် ပြီးတော့ ထည့်လိုက်ရတာ။ အဲဒီ လောင်စာတွေ ကုန်တဲ့ အချိန်မှာ ဂြိုဟ်တုကြီးကတော့ ပျက်တော့ မကျသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ကိုယ့် နိုင်ငံပေါ်မှာ ဖြတ်မသွားတော့ဘူး။ အဲဒါဆို သူက useless ဖြစ်တော့မှာ အသုံးမဝင်တော့ဘူးပေါ့နော်။
အဲဒါ အပေါ်မူတည်ပြီး ကျနော်တို့က ဒီဇိုင်းသက်တမ်း ဆိုပြီး စ ဒီဇိုင်းလုပ်ကတည်း က အဲဒါကို ကြိုတွက်ရပါတယ်။ ဆိုတော့ အခု လွှတ်မယ့် ၂ လုံး ဆိုတာမှာ ကျနော်တို့က ပထမတလုံး သက်တမ်း ကုန်ခါနီးမှာ နောက်တလုံး လွှတ်ဖို့ရာပေါ့။ အခု လက်ရှိပထမ တလုံးကတော့ ကျနော်တို့ ရှိပြီးသား ဒီဇိုင်းတွေ ထဲက ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ ဂြိုဟ်တု အမျိုးအစားကို ပထမ ကျနော်တို့ လွှတ်မှာ ပေါ့နော်။
ဒါပေမယ့် အဲဒီအထဲမှာ ကျနော်တို့ရဲ့ လိုအပ်ချက် requirement နဲ့ အကုန်လုံး ကိုက်တဲ့ဟာ ဖြစ်ချင်မှ ဖြစ်အုံးမယ်။ ကျနော်တို့က ဒီကြားထဲမှာ သူ့ကို သုံးမယ်။ သုံးနေရင်းနဲ့ မှ ကျနော်တို့ရဲ့ လိုချင်တာ demand တွေက ဘာတွေလဲ ဆိုတာ (စစ်တမ်းကောက်) survey တွေယူပြီး နောက် ဒုတိယ တလုံးကျတော့ ကိုယ်က အဲဒီအချိန်မှာ ဒီဇိုင်း လုပ်နိုင်ပြီပေါ့။ အဲဒီလို လုပ်နိုင်ချိန်မှာ ကိုယ့်နိုင်ငံရဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ ပိုပြီးကိုက်ညီတဲ့ ဒီဇိုင်းလုပ် လွှတ်မှာပေါ့။ သုံးမယ့် function တွေကတော့ ကမ္ဘာမြေ လေ့လာရေး ပါပဲခင်ဗျ။”
မေး။. ။“ဆရာတို့ တကယ်တမ်း လွှတ်တင်မှာက ဘယ်နေ့ပါလဲ ဆရာ”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။. ။“၂၀၂၁ ဖေဖေါ်ဝါရီပါ။ ဒါက ကျနော်တို့ လွှတ်တာ ပေါ့လေ။ တင်တာကတော့ NASA ဘက်ကနေ တင်မှာပါ။ အမေရိကန် space agency လေ။ အခု လက်ရှိတော့ ဖေဖေါ်ဝါရီလို့ ပေးထားတာ ရှိတယ်။ ရက်အတိအကျ ကတော့၊ ကျနော်တို့ ပထမ MyanmarSat2ဆို လွှတ်ရမယ့်ဟာ တကယ်လွှတ်ရမယ့် target date နဲ့ဆို လ လိုက်ကို နောက် ရောက် သွား တာ ရှိတယ်ဗျ။ ဒါက လွှတ်မယ့် အချိန်မှာ ရှိမယ့် ရာသီဥတု၊ ဘာညာတွေ လည်း ရှိတာပေါ့။ ရက်ကတော့ အတိအကျကြီး သူတို့ မပြောသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် ဖေဖေါ်ဝါရီထဲမှာ ကျနော်တို့ တင်မယ်။ တင်မယ် ဆိုတာ အဲဒီဖေဖေါ်ဝါရီလမှာ နာဆာက ဒုံးပျံက နိုင်ငံတကာ အာကာသစခန်းကို သွားဖို့ ရှိတာကို။ ကုမ္ပဏီ ဂြိုဟ်တုတွေ သယ်သွားပြီး အာကာသ စခန်းကိုပို့တယ်။ ဒီအာကာသ စခန်းထဲက နေမှ ဂြိုဟ်ပတ်လမ်းထဲကို မတ်လထဲမှာ ပြန်ပြီးထည့်ပေးမယ်။ ထည့်ပေးပြီးရင် ကျနော်တို့ နိုင်ငံပေါ်ကနေ ပတ်မယ်။”
မေဒ။. ။“ဒီလို အကောင်ထည် ဖေါ်နိုင်အောင် ဆရာတို့ ဘယ်နိုင်ငံတွေနဲ့ ချိတ်ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်နေတယ် ဆိုတာ ပြောပြပေးပါဆရာ။”
ဒေါက်တာကြည်သွင်။ ။“အခု လက်ရှိ စီမံကိန်းကတော့ ဂျပန်နိုင်ငံ ဟော်ကိုင်းဒိုး တက္ကသိုလ်နဲ့ ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှာပါ။ ပြည်ထောင်စု အစိုးရ အဖွဲ့ကလည်း မနှစ်က စက်တင်ဘာ ၅ ရက်နေ့က ကက်ဘိနက် အစည်းအဝေးမှာ သဘောတူ ခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ တကယ်တော့ တက္ကသိုလ်ချင်း ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်တယ် ဆိုပေမယ့် ဒါကတော့ နိုင်ငံတော် ဘတ်ဂျက်က ကျခံတဲ့ စီမံကိန်းပါ။ ဒီစီမံကိန်းက။”
လေကြောင်းနဲ့ အာကာသပညာ တက္ကသိုလ် ပါမောက္ခချုပ် ဒေါက်တာကြည်သွင် ပြောသွားတာပါ။
မွနျမာနိုငျငံ လကွေောငျးနဲ့ အာကာသပညာတက်ကသိုလျ MAEU က အငျဂငျြနီယာတှဟော မွကေမ်ဘာလလေ့ာရေးဂွိုဟျတု Earth Observation Satellite လှတျတငျဖို့ လုပျနပေါပွီ။ ဒီစီမံကိနျး နဲ့ပတျသကျပွီး အပွညျ့အစုံသိရဖို့ ပါမောက်ခခြုပျ ဒေါကျတာကွညျသှငျ ကို မေးမွနျးပွီး တငျပွပေးမှာပါ။
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“ကမ်ဘာမွလေလေ့ာရေးပေါ့နျော Earth Observation Satellite က micro satellite ဂွိုဟျတု အမြိုးအစား အသေးစား ပေါ့နျော။ ကီလိုဂရမျ ၅၀ ရှိတဲ့ မိုကျခရို Satellite ကို ကနြျောတို့ နိုငျငံတကာ အာကာသ စခနျးကနေ လှတျတငျဖို့ ရှိပါတယျ။”
ဒီကမ်ဘာမွလေလေ့ာရေး ဂွိုဟျတုဟာ မွနျမာနိုငျငံက ကိုယျပိုငျဂွိုဟျတု လှတျတငျဖို့ ကွိုးစားနတေဲ့ တတိယ အဆငျ့ ဖွဈပါတယျ။ ၂၀၁၆ မလေ ထဲမှာ Intelsat ကုမ်ပဏီ ရဲ့ ဆကျသှယျရေး channel ကို ငှါးသုံးတဲ့ MyanmarSat-1 နဲ့ ပထမအဆငျ့ကို စတငျခဲ့ပွီး ၂၀၁၉ နိုဝငျဘာလမှာ Intelsat ကုမ်ပဏီနဲ့ပဲ နောကျ channel တခုကို ၁၅ နှဈတာ ငှါးသုံးတဲ့ MyanmarSat-2 ကတော့ ဒုတိယ အဆငျ့ ဖွဈပါတယျ။
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“ဆကျသှယျရေးကဏ်ဍ အနနေဲ့ ကနြျောတို့ Intelsat နဲ့ MyanmarSat-1 ဆိုပွီး လှတျခဲ့ပါတယျ။ အဲဒါကတော့ condoSat အမြိုးအစားပေါ့နျော။ ဟိုမှာရှိတဲ့ transponder ကို ဝယျပွီး မွနျမာ့ဆကျသှယျရေး ကဏ်ဍ၊ နောကျ အငျတာနကျ အသုံးပွုမှုတှေ၊ ရုပျသံထုတျလှတျမှုတှေ အတှကျပါ။ နောကျတခါ ကနြျောတို့က joint satellite ပေါ့နျော Intelsat နဲ့ ကနြျောတို့ မွနျမာဘကျနဲ့ တဝကျစီ ကခြံ ပွီးတော့ ပါတဲ့ transponder လညျး တဝကျစီပေါ့။ အဲဒီလို လှတျခဲ့တာတှေ ရှိပါတယျ။ ဒါတှကေ ဆကျသှယျရေး ကဏ်ဍ အတှကျ အမြားကွီး အထောကျအကူပွုတယျ။ နောကျ အငျတာနကျ အသုံးပွုမှုတှေ၊ broadcasting အသံလှငျ့တာတှေ အတှကျ အထောကျအကူ ပွုတယျ။
သို့သျောလညျး ကနြျောတို့ ဒီမှာ လိုတာတှကေ ကဏ်ဍတှေ sector တှေ အမြားကွီးပဲ။ စိုကျပြိုးရေး၊ မှေးမွူရေး၊ သဈတော၊ ရလေုပျငနျး၊ နောကျ သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ စသဖွငျ့ ဒီဟာတှေ အတှကျလညျး ဂွိုဟျတု လှတျဖို့ရာ လိုတယျ။. အဲဒီအတှကျက အခု ပွောတဲ့ ကမ်ဘာမွလေလေ့ာရေး ဂွိုဟျတု လိုပါတယျ။ အဲဒီ ဂွိုဟျတုကနေ ကောငျးကငျဂွိုဟျတုဓါတျပုံတှေ satellite image တှေ ပေးတယျ။ ဒီ ဓါတျပုံတှေ ပျေါမှာ ကနြျောတို့က နညျးပညာနဲ့ သုံးနိုငျတာ အတျောမြားမြားကို ဒီ ကမ်ဘာမွဂွေိုဟျတုကနေ ပံ့ပိုးပေးနိုငျတယျပေါ့။”
မေး။. ။ “ဘယျလို ပံ့ပိုးပေးနိုငျတာပါလဲ။ ဒီဂွိုဟျတုကို အသုံးခနြိုငျတာတှကေ ဘာတှပေါလဲ”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျဆို ဆိုပါတော့ ကနြျောတို့မှာ ရကွေီးတယျ။ ရကွေီးတယျဆို ရဧေရိယာ - flood monitoring (ရလေြှံမှု စောငျ့ကွညျ့ရေး) လုပျလို့ရတယျ။ အဲဒီ ရလေြှံတာ ကနေ ပကျြစီးမှု ဘယျလောကျဖွဈ နိုငျသလဲ၊ နောကျ ရလှေတျရာတှေ ဘယျလို စီမံခနျ့ခှဲ ကွမလဲ ပေါ့နျော။ Disaster management သဘာဝ ဘေးအန်တရာယျ ဆိုငျရာ စီမံခနျ့ခှဲမှု။
နောကျတခါ အခု လှတျတငျမယျ့ဟာက weather ရာသီဥတု အတှကျလညျး ကွိုတငျခနျ့မှနျးလို့ forecasting လုပျလို့ရမယျ။ ဆိုပါစို့ စောစောက thunder storm လပွေငျးမုနျတိုငျး တခုက ဘယျကို ဦးတညျ သှားနတေယျ။ ဘယျလောကျနှုနျးနဲ့ တိုကျနတေယျ ဆိုတဲ့ မိုးလဝေဿ ခနျ့မှနျး တှကျခကျြမှု ကိုလညျး ပိုပွီး accuracy ကောငျးအောငျ ပိုပွီး တိတိကကြ ဖွဈအောငျ လုပျပေးနိုငျတယျပေါ့နျော။
နောကျ စိုကျပြိုးရေးဆို ဒီ ကောကျပဲ သီးနှံတှရေဲ့ အခွနေကေို စောငျ့ကွညျ့လလေ့ာတဲ့ crop monitoring ပေါ့။ ကောကျပဲသီးနှံတှကေ ပိုးကနြသေလား။ ဒါမှ မဟုတျလညျး သူတို့ရဲ့ အပငျဖွဈထှနျးမှု အတှကျ မွသွေဇာ လိုနသေလား။ ဒါက ကနြျောတို့ ကောငျးကငျဂွိုဟျတု ဓါတျပုံ ရလာတာ ကနေ ကနြျောတို့ color index အရောငျတှနေဲ့ သတျသတျမှတျမှတျ ပွနျခှဲပွီးတော့၊ သဘောက- ဆိုပါစို့ ကနြျောတို့က ပိုးမှားတှေ ကတြယျ၊ ကြိုငျးကောငျတှေ ကတြယျ၊ ဒါဆိုလို့ ရှိရငျလညျး ကနြျောတို့က satellite image ကောငျးကငျဂွိုဟျတု ဓါတျပုံ ရိုကျလိုကျတယျ။ ရိုကျလိုကျပွီးတော့ အဲဒီအပျေါကနေ ဘယျနရော တှကေတော့ ပိုးကနြတေယျ ဆိုတာ ကနြျောတို့က အကုနျ အတိအကြ ပွနျပွီးတော့ တှကျထုတျယူလို့ ရတယျပေါ့နျော။
ကနြျောတို့ အခု satellite image က GIS နညျးပညာနဲ့ အခုဆို survey မွတေိုငျးတာတှေ၊ ဆောကျလုပျရေးဝနျကွီးဌာနတို့ ဘာတို့ကနေ သုံးတဲ့ land use မွအေသုံးခမြှုတှေ၊ နောကျ သဈတောတှရေဲ့ အနအေထားတှေ ပေါ့နျော။ deforestation သဈတောပွုနျးတီးမှုတှေ ဘယျလို ဖွဈနသေလဲ ၊ သဈတောတှပွေုနျးတီးမှုဘယျလိုရှိတယျ၊ ဘယျနရောတှမှော ဘယျလို cover ဖွဈအောငျ ပွနျလုပျလို့ ရမလဲ ဆိုတာတှေ၊ မွအေသုံးခမြှုနဲ့ ပတျသကျတာတှေ၊ နောကျ urban planning တှေ ပေါ့နျော။ ဒီဟာတှေ ကိုလညျး ရလာတဲ့ satellite image ကနမှေ GIS နညျးပညာနဲ့ ပေါငျးပွီး အသုံးခမြယျ ဆိုရငျ ရပါတယျ။ နောကျဆုံး national planning ပေါ့နျော။ ဒီ national planning လုပျတဲ့ အခြိနျ ထိအောငျကိုပဲ ကနြျောတို့ satellite image က အမြားကွီး အထောကျအကူ ပေးနိုငျပါတယျ။”
မေး။. ။“အခု ကမ်ဘာမွေ လလေ့ာရေးဂွိုဟျတု EOS စီမံကိနျးမှာ လှတျတငျမယျ့ ဂွိုဟျတုတှေ နဲ့ ပတျသကျပွီး ဘယျလို စီစဉျထားပါသလဲ။”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“အခု စီမံကိနျးမှာတော့ ဂွိုဟျတု ၂ လုံးလှတျတငျမှာပါ။ အခု ပထမတလုံးက လာမယျ့ ၂၀၂၁ ဖဖေျေါဝါရီမှာ တငျမှာပါ။ တငျတာက ကမ်ဘာမွေ အထကျ ကီလိုမီတာ ၄၀၀ နဲ့ ၆၀၀ ကွားထဲမှာ ရှိမှာပေါ့နျော။ နောကျ ဒုတိယ အလုံးကတော့ ကီလိုမီတာ ၆၀၀ ဖွဈပါတယျ။ ဂွိုဟျတုမှလညျး သူ့သကျတမျးနဲ့သူ ရှိပါတယျ ခငျဗြ။ ဒါဆို ၂ နှဈခှဲ သုံးနှဈ အဲဒီ ပတျဝနျးကငျြ အဲလောကျမှာ သုံးလို့ရပါတယျ။
ဥပမာ ဆကျသှယျရေးဂွိုဟျတု ဆိုရငျ သူ့ရဲ့ သကျတမျးက ၁၅ နှဈ။ တခါထညျး သတျမှတျပွီးသား။ သတျမှတျပွီးသား ဆိုတာက သူ့ထကျ ပိုသှားလညျး နဲနဲပဲ။ အမြားကွီး မပိုဘူးပေါ့နျော။ ဘာလို့လညျး ဆိုတော့ သူ့မှာ ဂွိုဟျတုကို ထိနျးကြောငျးဖို့ လိုတဲ့ feul လောငျစာတှေ ရှိတယျ။ အဲဒါက ဂွိုဟျတုနဲ့အတူ တခါထဲ တှကျခကျြ ပွီးတော့ ထညျ့လိုကျရတာ။ အဲဒီ လောငျစာတှေ ကုနျတဲ့ အခြိနျမှာ ဂွိုဟျတုကွီးကတော့ ပကျြတော့ မကသြေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ကိုယျ့ နိုငျငံပျေါမှာ ဖွတျမသှားတော့ဘူး။ အဲဒါဆို သူက useless ဖွဈတော့မှာ အသုံးမဝငျတော့ဘူးပေါ့နျော။
အဲဒါ အပျေါမူတညျပွီး ကနြျောတို့က ဒီဇိုငျးသကျတမျး ဆိုပွီး စ ဒီဇိုငျးလုပျကတညျး က အဲဒါကို ကွိုတှကျရပါတယျ။ ဆိုတော့ အခု လှတျမယျ့ ၂ လုံး ဆိုတာမှာ ကနြျောတို့က ပထမတလုံး သကျတမျး ကုနျခါနီးမှာ နောကျတလုံး လှတျဖို့ရာပေါ့။ အခု လကျရှိပထမ တလုံးကတော့ ကနြျောတို့ ရှိပွီးသား ဒီဇိုငျးတှေ ထဲက ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့ လိုအပျခကျြနဲ့ ကိုကျညီတဲ့ ဂွိုဟျတု အမြိုးအစားကို ပထမ ကနြျောတို့ လှတျမှာ ပေါ့နျော။
ဒါပမေယျ့ အဲဒီအထဲမှာ ကနြျောတို့ရဲ့ လိုအပျခကျြ requirement နဲ့ အကုနျလုံး ကိုကျတဲ့ဟာ ဖွဈခငျြမှ ဖွဈအုံးမယျ။ ကနြျောတို့က ဒီကွားထဲမှာ သူ့ကို သုံးမယျ။ သုံးနရေငျးနဲ့မှ ကနြျောတို့ရဲ့ လိုခငျြတာ demand တှကေ ဘာတှလေဲ ဆိုတာ (စဈတမျးကောကျ) survey တှယေူပွီး နောကျ ဒုတိယ တလုံးကတြော့ ကိုယျက အဲဒီအခြိနျမှာ ဒီဇိုငျး လုပျနိုငျပွီပေါ့။ အဲဒီလို လုပျနိုငျခြိနျမှာ ကိုယျ့နိုငျငံရဲ့ လိုအပျခကျြနဲ့ ပိုပွီးကိုကျညီတဲ့ ဒီဇိုငျးလုပျ လှတျမှာပေါ့။ သုံးမယျ့ function တှကေတော့ ကမ်ဘာမွေ လလေ့ာရေး ပါပဲခငျဗြ။”
မေး။. ။“ဆရာတို့ တကယျတမျး လှတျတငျမှာက ဘယျနပေ့ါလဲ ဆရာ”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။. ။“၂၀၂၁ ဖဖေျေါဝါရီပါ။ ဒါက ကနြျောတို့ လှတျတာ ပေါ့လေ။ တငျတာကတော့ NASA ဘကျကနေ တငျမှာပါ။ အမရေိကနျ space agency လေ။ အခု လကျရှိတော့ ဖဖေျေါဝါရီလို့ ပေးထားတာ ရှိတယျ။ ရကျအတိအကြ ကတော့၊ ကနြျောတို့ ပထမ MyanmarSat2ဆို လှတျရမယျ့ဟာ တကယျလှတျရမယျ့ target date နဲ့ဆို လ လိုကျကို နောကျ ရောကျ သှား တာ ရှိတယျဗြ။ ဒါက လှတျမယျ့ အခြိနျမှာ ရှိမယျ့ ရာသီဥတု၊ ဘာညာတှေ လညျး ရှိတာပေါ့။ ရကျကတော့ အတိအကကြွီး သူတို့ မပွောသေးဘူး။ ဒါပမေယျ့ ဖဖေျေါဝါရီထဲမှာ ကနြျောတို့ တငျမယျ။ တငျမယျ ဆိုတာ အဲဒီဖဖေျေါဝါရီလမှာ နာဆာက ဒုံးပြံက နိုငျငံတကာ အာကာသစခနျးကို သှားဖို့ ရှိတာကို။ ကုမ်ပဏီ ဂွိုဟျတုတှေ သယျသှားပွီး အာကာသ စခနျးကိုပို့တယျ။ ဒီအာကာသ စခနျးထဲက နမှေ ဂွိုဟျပတျလမျးထဲကို မတျလထဲမှာ ပွနျပွီးထညျ့ပေးမယျ။ ထညျ့ပေးပွီးရငျ ကနြျောတို့ နိုငျငံပျေါကနေ ပတျမယျ။”
မဒေ။. ။“ဒီလို အကောငျထညျ ဖျေါနိုငျအောငျ ဆရာတို့ ဘယျနိုငျငံတှနေဲ့ ခြိတျဆကျပွီး ဆောငျရှကျနတေယျ ဆိုတာ ပွောပွပေးပါဆရာ။”
ဒေါကျတာကွညျသှငျ။ ။“အခု လကျရှိ စီမံကိနျးကတော့ ဂပြနျနိုငျငံ ဟျောကိုငျးဒိုး တက်ကသိုလျနဲ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှာပါ။ ပွညျထောငျစု အစိုးရ အဖှဲ့ကလညျး မနှဈက စကျတငျဘာ ၅ ရကျနကေ့ ကကျဘိနကျ အစညျးအဝေးမှာ သဘောတူ ခှငျ့ပွုခဲ့တာပါ။ တကယျတော့ တက်ကသိုလျခငျြး ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျတယျ ဆိုပမေယျ့ ဒါကတော့ နိုငျငံတျော ဘတျဂကျြက ကခြံတဲ့ စီမံကိနျးပါ။ ဒီစီမံကိနျးက။”
လကွေောငျးနဲ့ အာကာသပညာ တက်ကသိုလျ ပါမောက်ခခြုပျ ဒေါကျတာကွညျသှငျ ပွောသှားတာပါ။
အလိုအလျောက် အတက်အဆင်းလုပ်နိုင်တဲ့ လေယာဉ်နည်းပညာသစ်
အာကာသကမြင်ရတဲ့ ဒီသီတင်းပတ် ကမ္ဘာမြေ